खरीद गाईड फार्मेसी RXS
अनिद्राको औषधी उपचार - के जोखिमले फाईदालाई बढावा दिन्छ?
01 सक्छ, 2021
अनिद्राको लागि प्राकृतिक उपचार
अप्रिल 09, 2021
एन्टी-चिन्ता औषधिको इतिहास
अप्रिल 07, 2021
अप्रिल 17, 2020 2020-04-17 2:18
1 स्वीकृत मुद्रा
2 खाता दर्ता गर्दै
3 सदस्यता नीति
4 कसरी पाठ्यक्रम खरीद गर्ने?
5 स्वीकृत क्रेडिट कार्ड
6 किन हाम्रो पाठ्यक्रम खरीद गर्ने?
कोर्सका सबै मूल्यहरू अमेरिकी डलरमा छन्। हामी मुख्य रूपमा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी स्वीकार गर्दछौं, यस बीचमा अन्य प्रमुख मुद्राहरू पनि सम्भव छ तर कुल रकम प्रत्येक देशको लक्षित विनिमय दर र कर नीतिहरूमा आधारित हुन्छ।
खाता दर्ता गर्दै
कुनै कोर्स किन्न वा हाम्रो केन्द्रको सदस्य बन्नको लागि, ग्राहकहरू / सिकारुहरूले पहिले निम्न जानकारी प्रदान गर्ने व्यक्तिगत खातामा दर्ता गर्नुपर्दछ:
जन्म मिति (आवश्यक)
राहदानी / आईडी नं। (आवश्यक)
हालको क्यारियर (आवश्यक)
मोबाइल फोन नम्बर (आवश्यक)
ईमेल ठेगाना (आवश्यक)
शौक र रुचि (वैकल्पिक)
सामाजिक प्रोफाइल (वैकल्पिक)
एक पटक सफलतापूर्वक हाम्रो केन्द्रको सदस्य बन्न दर्ता भएपछि, प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरूको खातामा कुनै पनि समयमा सयौं निःशुल्क र उपयोगी पाठहरूको आनन्द लिन सक्दछन्। जब उनीहरूले पाठ्यक्रम खरिद गर्छन्, तिनीहरूको खाता केहि पोइन्ट्समा जम्मा हुनेछ। यी पोइन्टहरू हाम्रो सदस्यता प्रणालीमा प्रयोगकर्ताहरूको श्रेणीमा संकलन गरिन्छ। प्रत्येक तहलाई बिभिन्न सुविधाहरू र छुटका साथ पुरस्कृत गरिन्छ।
तपाईं आफ्नो सदस्यता स्तर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
कसरी पाठ्यक्रम खरीद गर्ने?
यस पाठ्यक्रम खरीद गर्नुहोस् बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि खरिद पूर्ण गर्नको लागि तपाईंको क्रेडिट कार्ड जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। यदि तपाईंले यो जानकारी बचत गर्न छनौट गर्नु भएको छ भने, यो स्वत: भरिनेछ तपाईं मात्र १ क्लिक मा चेक आउटको साथ अगाडि बढ्नका लागि।
स्वीकृत क्रेडिट कार्ड
* करहरू तपाईंको स्थानीय बैंक र स्थान द्वारा गणना गरिन्छ।
किन हाम्रो पाठ्यक्रम खरीद गर्ने?
नियमित आधारमा अपडेट गरिएको सामग्री
सुरक्षित र परेशानी-मुक्त भुक्तान
सजिलो पहुँच र स्मार्ट उपयोगकर्ता ड्यासबोर्ड